Ny 3 tatitra isaky ny B2B CMO dia mila miaina sy mivelona amin'ny 2020 | Martech Zone
Rehefa mihodina manakaiky ny fitotonganana ny toekarem-pirenena ary mihena ny tetibolan'ny orinasa, ny zava-misy ho an'ireo mpivarotra B2B amin'ity taona ity dia ny vola lany amin'ny dolara rehetra dia hadinina, hadinina ary mila ampifandraisina mivantana amin'ny vola miditra. Ireo mpitarika ara-barotra dia mila mifantoka amin'ny laser amin'ny famindrana ny teti-bolany amin'ny tetika sy programa izay mifanaraka amin'ny zava-misy vaovao an'ny mpividy sy fiaraha-miasa amin'ny varotra hahatratra ny tanjona kendrena mandritra ny taona.
Saingy ahoana no hahafantaran'ny CMO raha mampiasa vola amin'ny programa sy tetika mety izy ireo raha tsy manana loharanom-pahalalana sy analytics azo antoka ho azy ireo? Ahoana no hataon'izy ireo handresy lahatra ireo mpiray antoka aminy sy ny ekipa mpanatanteraka fa ny marketing dia tsy fandaniam-bola araka ny antonony fa fampiasam-bola amin'ny vola miditra ho avy sy motera fitomboan'ny orinasa?
Miaraka amin'ny teti-bola voafintina sy ireo teritery hafa mifandraika amin'ny COVID-19, ny fidirana amin'ny angon-drakitra azo antoka sy ny analytics dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay satria ahafahan'izy ireo CMO sy mpitarika marketing manaporofo ny ROI, mampifamatotra mivantana ny hetsika ara-barotra amin'ny fidiram-bola ary manandrana paikady sy fantsona samihafa hamaritana ny ho avy ny fampiasam-bola. Ireo mpivarotra, amin'ny natiora, dia heverina ho mpilaza tantara - koa maninona isika no tsy afaka manantena ny hitantara tantara amin'ny angon-tsika manokana? Tokony ho tsatòka ambony latabatra izany — amin'ny taona 2020 sy ny sisa.
Ny zava-misy anefa, na dia mety manana fidirana amina teboka an-jatony sy tatitra an-jatony aza ireo mpitarika marketing, dia mety tsy hifantoka amin'ireo izay misy akony lehibe amin'ny orinasa izy ireo-indrindra rehefa miova haingana be ny tsena. Nataoko tery amin'izay hitako ireo tatitra telo tena fitsikerana izay ilain'ny CMO an-tanana izao:
Mamokatra vola ve ny MQL anao? Azonao porofoina ve izany? Toa foto-kevitra tsotra sy tsotra ny ahafahana manara-maso ny loharanom-barotra amin'ny fitarihana ary miantoka fa 'omena' ny angon-drakitra miaraka amin'ny fotoana mety sy vola azo amin'izany.
Na izany aza, raha ny tena izy, ny varotra B2B dia maharitra faharetana ary sarotra be, mahatafiditra olona marobe ao amin'ny kaonty sy teboka marobe ary fantsona mandritra ny dian'ny mpividy. Ho fanampin'izay, ny varotra matetika dia voatosika hiteraka ny fitarika azy ireo izay miafara amin'ny fifaninanana na mihoatra aza ny fitarihana vokarin'ny varotra ao amin'ny CRM. Mba hiantohana ny fahamasinan'ity angon-drakitra ity sy ireo tatitra mifandraika amin'izany, dia zava-dehibe fa mifanaraka tsara amin'ny lohan'ny varotra ny CMO manoloana ny fizotry ny famokarana fitarihana sy fotoana mety.
Pro Soso-kevitra: Na iza na iza namorona ny lohany tamin'ny voalohany (marketing na varotra) dia tokony hanaraka ny fomba rehetra hamoronana fotoana ahafahana mitahiry ny fivezivezena. Tombontsoa fanampiny iray amin'izany dia ny hahafahanao mandrefy fotoana tsy tapaka sy marina handefasana azy.
Tatitra Velocity Pipeline
Ahoana no ampisehoanao, amin'ny alàlan'ny angona, fa mifanaraka amin'ny varotra ny varotra? Ny mpitarika marketing dia miresaka momba ny fiaraha-miasa akaiky amin'izy ireo amin'ny varotra matetika (vakio: tsy tapaka) fa mila manaporofo fa ny mpitarika mahay (MQL) dia manana taha ambony amin'ny fanekena varotra, izany hoe manova azy ireo ho mpitarika mahay (SQL). . Ireo orinasam-barotra izay nametraka doka ara-dalàna ho an'ny varotra hanaiky sy handà ny fitarihana ARY manangona tahirin-kevitra kalitao momba ny antony fandavana dia ireo izay natsangana mba hahomby amin'ny fanaovana tatitra sy fandrefesana amin'ity faritra manakiana ity.
Ho an'ireo fikambanana izay manana ny marketing amin'ny kaonty (ABM), dia manova tanteraka ny lalao izany, satria ireo mpivarotra ireo dia mampifandray ny kaonty nomeny ho an'ny portfolio misy ny kaonty mpivarotra. Noho izany, ny tanjona dia ny handrefesana ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny mpivady mitambatra (marketing sy varotra) (mamokatra vola) vs ny fahombiazan'ny tsirairay araka ny voalaza etsy ambony. Ny ankamaroan'ny fikambanana B2B dia mbola tsy (mbola) manao tatitra ABM momba ny tahan'ny MQL amin'ny SQL satria manana rafitra mitatitra tokana izy ireo ary, noho izany, tsy misy fanentanana hanao tatitra miaraka.
Pro Soso-kevitra: Ovao ny famporisihana sy valisoa ho an'ny ekipa roa, omeo valisoa ireo mpikambana roa amin'ny ekipa mifototra amin'ny metrika nozaraina toy ny haavon'ny fifampitohizan'ny portfolio sy ny kaonty marketing, ny isan'ny MQL izay mivadika ho SQL, ary ny isan'ny SQL izay mivadika ho afaka. .
Tatitra momba ny fahombiazan'ny atiny
Raha maro ny ekipa marketing amin'izao fotoana izao no nametraka paikady votoaty matanjaka mifototra amin'ny personas mpividy, mbola miady mafy izy ireo amin'ny famoronana tatitra momba ny fahombiazan'ny votoaty toa mahitsy izay mamaritra ny atiny avo lenta sy ambany. Na dia mety tsara indrindra ao an-dakilasy aza ny atiny, tsy misy dikany izany raha tsy asehon'ireo ekipa mpivarotra ny antony maha-zava-dehibe izany sy ny fiantraikany eo amin'ny orinasa.
Raha ny mahazatra, ny tatitra momba ny marketing dia a olona mifantoka, (izany hoe ny dia ataon'ny mpanjifa na ny làlan-dàlana mitarika làlana), mba hanarahana ny fiantraikan'ny fidiram-bola, fa azonao atao koa ny mandinika ny fanaovana tatitra miaraka amina fifantohana atiny sy fandrefesana ny fananana tsirairay hatramin'ny fidiram-bola. Ao amin'ny rafitra voaorina tsara, ireo teboka ireo dia mifanaraka amin'ny alàlan'ny firaketana an'io olona io. Raha ny proxy ho an'ny vola dia olona ary ny refy ho an'ny atiny dia olona (sy ny fanjifany ny atiny), ny fidirana amin'ny votoatiny rehetra dia azo lazaina fa fidiram-bola. Io angona io ihany izay manohana ny dian'ny mpanjifa, zahana fotsiny amin'ny fomba fijery atiny.
Pro Soso-kevitra: Raha toa ka be loatra ny famindrana ny vola miditra amin'ny singa atiny tsirairay dia atombohy amin'ny famindrana atiny ho an'ny MQL. Azonao atao ny manisy laharana ny atiny amin'ny isan'ny MQL isaky ny fananana noforonina. Ary azonao atao ny manome lanja ny fizarana MQL manerana ny firafitry ny atiny.
Tags: raharaham-barotralehiben'ny bizina marketingcmofahombiazan'ny atinyCovid-19Mpanjanantanymitarika-to-vola miditrahetsika marketingmpitarika marketingfampisehoana marketingmqlhafainganam-pandeha fantsonatatitra momba ny hafainganam-pandeha fantsonatatitra
Eric Hollebone, Chief Officer Officer, mitondra DemandLabNy fidiram-bolan'ny Ecosystem® fiainana ho an'ireo mpanjifany B2B amin'ny alàlan'ny fampidirana ny paikady, ny teknolojia ary ny angona manerana ny marketing, ny varotra ary ny serivisy mitohy. Ny mombamomba ny haitao sy ny haitao dia ahafahan'i Eric manatona ny varotra amin'ny fomba fijery siantifika, teknika ary data natokana ho azy. Androany, mifantoka amin'ny mety hisian'ny data be, AI, teknolojia fanilo, ary ny IoT izy hanova ny tontolon'ny varotra ary hanafaingana ny fanovana nomerika manerana ny fikambanana.